महालक्ष्मी विकास बेैंकद्वारा विद्यालयका लागि आर्थिक सहयोग — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बैकिङ > महालक्ष्मी विकास बेैंकद्वारा विद्यालयका लागि आर्थिक सहयोग
महालक्ष्मी विकास बेैंकद्वारा विद्यालयका लागि आर्थिक सहयोग
हेटौंडा । महालक्ष्मीविकास बेैंक लि.द्वारा विद्यालयमा शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकका हेटौंडा र टाँडी शाखाले विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको लागि शुद्ध पिउने पानी व्यवस्थापनका लागि तीनलाख पन्ध्र हजार (रु.३,१५,०००)रुपैयाको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको हो ।
बैंकले मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा न. ११ मा अवस्थित श्री आनन्द भैरव आधारभुत विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको लागि शुद्ध पिउने पानी व्यवस्थापनका लागि क्रमश. रु. एक लाख पचास हजार (रु.१,५०,०००) रुपैया आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छ ।
त्यस्तै बैंकले चितवनको इच्छाकामना गाँउपालिका वडा न.७ मा अवस्थित राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको लागि शुद्ध पिउने पानी व्यवस्थापनका लागि रु. एक लाख पैसठ्ठी हजार (रु.१,६५,०००) रुपैया आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छ ।
गत असार २ गते बैंकको हेटौंडा शाखामा सम्पन्न कार्यक्रमकाबीच बंैकका शाखा प्रबन्धक शम्भु प्रसाद पराजुलीले रोटरी क्लब अफ हेटौंडाका अध्यक्ष ईन्द्र प्रसाद नेपाललाई रु. एक लाख पचास हजार रकमको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो।
त्यसैगरी असार ०८गते रोयल सेन्चुरी होटलमा सम्पन्न एक कार्यक्रमका बीच शाखाका प्रबन्धक श्यामबाबु तिमिल्सिनाले रोटरी क्लब अफ नारायणी मिडटाउनका अध्यक्ष अशेष भण्डारीलाई रु. एक लाख पैसठ्ठी हजार रकमको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
देशका शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरुमा १०२ वटा शाखाहरुमार्फत यस बैंकले सेवा प्रदान गरिरहेको छ । बैंकले आगामी दिनमापनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अझै प्रभावकारी कार्यक्रमहरु गर्दै जाने जनाएको छ ।
२०७७ असार १० गते १३:०१ मा प्रकाशित
आर्थिक सहयोगमहालक्ष्मी विकास बेैंक
नेकपा स्थायी समिति बैठकका ५ एजेण्डा तय, के-के छन् एजेण्डामा ?
अब एमालेको सदस्यताका लागि पनि लिखित परीक्षा,आईतबार ४ सयभन्दा बढि परिक्षार्थी सामेल हुँदै !
सहकारी संस्था संचालन गरी रकम ठगी गर्ने ब्यक्ति पक्राउ
एनआइसी एशियाको २१.०५ प्रतिशत लाभांश भोलि पारित हुँदै